अर्काको खोस्ने धुनमा आफ्ना गायब ! - Dainik Nepal
अर्काको खोस्ने धुनमा आफ्ना गायब !
दैनिक नेपाल २०७४ कार्तिक २८ गते ८:१२
काठमाडौं, २८ कात्तिक । चुनावी चलहपहल बढिरहँदा चितवन–३ अहिले चर्चामा रहेको छ । खास कारण बामपन्थी गठबन्धनको एउटा प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता विक्रम पाण्डेको स्पर्धाका कारण उक्त क्षेत्र चर्चामा छ । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
पाण्डेले माओवादीलाई राम्रोसँग हराउने दाबी गरेका छन् । उनलाई कांग्रेसको साथ रहेको छ । तर उनलाई नैतिक संकट भने आफ्नाबाटै सुरू भएको छ । कांग्रेसको बलमा ठूला कुरा गरेपनि आफ्ना संगठनका स्थानीय बलिया नेताहरू भने प्रचण्डले खोसेका छन् ।
एमाले र माओवादी कार्यकर्ताका मत नखोसी पाण्डेको जीत सुनिश्चित नरहेको दाबी धेरैले गरेका छन् । हुन पनि चुनावी रूझानले त्यहि देखाउने गरेको छ । पाण्डे प्रचण्डभन्दा ७ हजार मतान्तरले कमजोर रहेको प्रारम्भिक रूझानले देखाइसकेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको चितवन–३ मा हुन लागेको यो स्पर्धा यसकारण पनि रोचक छ की यसअघि पाण्डेले जित निकालेका थिए । अब के गर्लान् ? एउटा रूझानले बामपन्थी गठबन्धन बलियो देखिएको छ । तर, पाण्डेका लागि जित निकाल्न त्यति असम्भव पनि छैन । उनले गठबन्धनको एउटा घटक नेकपा एमालेको फरक पंक्तिको साथ पाए प्रचण्डलाई सकस हुन सक्नेछ । तर, ४ हजार मतादाताको मत मात्रै आफु अनुकुलतामा पाण्डेले पार्न सक्लान् त ?
कांग्रेसको समर्थनमा पाण्डे चितवनमा उठेका हुन् । निर्माण व्यवसायी समेत रहेका पाण्डे यसअघि चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नं ५ बाट विजयी भएका थिए भने ४ बाट कांग्रेसले जितेको थियो । अहिले क्षेत्र नम्बर ३ यसअघिको ४ र ५ मिलेर बनेको क्षेत्र भएकाले पाण्डे पनि बलियो उम्मेदवार हुन् । कांग्रेस, राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकका मतदाताको मत जोड्दा बामपन्थी गठबन्धनभन्दा ७ हजार मत कम हुन आउँछ ।
यो मतसंख्याको ४ हजार मतमात्र पाण्डेले आफूतिर आकर्षित गर्नसके प्रचण्डलाई जित निकाल्न कठिन हुनेछ । तर, माओवादीको चुनावी अभियान र विकासका कुरामा प्रचण्ड अगाडी छन्् । महानगरपालिकाको मेयर समेत माओवादी नै निर्वाचित भएका कारणले त्यसले पाण्डेलाई केही असर गर्नेछ । उनले प्रचण्डलाई पर्यटक उम्मेदवार भनेपनि असलमा प्रचण्डको गृहजिल्ला भएका कारणले उनलाई जिताउन केन्द्रदेखि नै ठूलै चलखेल हुन्छ ।
यता, पाण्डेका निक्कै नजिकका कार्यकर्ता अहिले प्रचण्डको पछि लागिसकेका छन् । त्यतिमात्र होइन स्थानीय चुनावले नाम कमाएका स्थानीय नेता देवी ज्ञवाली पनि निर्विकल्प प्रचण्डको चुनावी अभियानमा सक्रिय रहेका छन् । पाण्डेका खास मानिने राजेन्द्र कुमालको नेतृत्वमा तीन सय भन्दा बढि युवा प्रचण्डको साथमा लागेका छन् । केही नभएपनि यो क्रममा कुमालले प्रभाव पार्नसक्ने मतका कारणले पनि पाण्डे कमजोर हुँदै गएका छन् । अर्काको खोसेर जित्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका पाण्डेका आफ्ने गायब भएपछि उनलाई चुनाव निक्कै कठिन हुनसक्ने बताइएको छ ।
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिलाई भवन र जग्गा पुगेन
वीरगन्जबाट ४० हजारमा नोट छाप्ने मेसिन खरिद
जेलमै यसरी बनेको थियो नक्कली नोट छाप्ने योजना